Sceneries ziyafumaneka Rikoooo na wathi ngokuzenzekelayo, kukho isisombululo? (Win 7 / 8 +) Le nkqubo isebenza kokubili i-Prepar3D kunye ne-FS2004.Ngokungagqibekanga, i-FSX efakwe kwi-«C: \_ Program Files (x86) \_ iMidlalo yeMicrosoft \_ Microsoft Flight Simulator ...
Usebenzsa ezingabonakaliyo-moya ye B777 yam. Ndingenza ntoni ? (FSX / P3D) I-gauge Boeing777-300.gau, eyadala ekuqaleni kwi-FS2004, ayisebenzi ku-FSX ngaphandle kweDLL ethile Ukujongana nale ngxaki, kufuneka ...
Ezinye zam Izongezelelo ziselubala okanye angwevu (ngaphandle texture). Ndingenza ntoni ? (FSX SP2 / lonikezelo) Into ebalulekileyo, xa unayo isongezelelo apho imodeli ye-3D idalwe ku-FS2004 kodwa isetyenziswe kwi-FSX SP2 (nayo ibizwa ngokuba ...
moya wam iphumela xa utshintsha uluvo. Ndingenza ntoni ? (FSX) Ezinye zeenqwelo zeenqwelo zeenqwelo zomoya zithatha i-tarmac, kwaye into efanayo iya kwenzeka kwizithuthi ezijikelezeyo: leyo bhulozi eyaziwayo, ...
FSX ukuba agubungele xa ibaleka Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10-64 zibhabha simahla MP eengxoxo. Ingaba kukho sisombululo? Umba ukhankanywe kumanyathelo amabini alula: Isinyathelo 1: Landa UIAutomationCore.dllStep 2: Yenza ipayili ye-ZIP kwaye uyibeke ...
Inyathelo 1: Umxokozelo UIAutomationCore.dll
Indlela yokufaka FSX on Windows 8 / 8.1 / 10? Ukufakela i-FSX (zonke iinguqulelo) kwi-Windows 8 / 8.1, landela amanyathelo: 1- Faka i-FSX ngokuqhelekileyo ngeDVD.2- Xa ...
Yintoni FSX SP1 and SP2? I-SP imele i-Service Pack 1 okanye i-2, eneempawu zokuphucula i-FSX. Zifumaneka emva kokukhululwa komdlalo.I-Simulator ye-Light ...
SP imele Service Pack 1 okanye 2, ezo amabala ekuphuculeni FSX. Ziyafumaneka emva kokukhululwa emdlalweni lowo.
Flight Simulator X Service Pack 1 (Cofa ukuze ulande) Awalungise miba ilandelayo ezifunyaniswe ngabaxhasi emva kokukhutshwa umdlalo othi:
• yovulo kunye nokufakelwa
• Iingxaki ezinxulumene nokusetyenziswa izakhi ezongezelelweyo
• Ukuphuculwa yokusebenza
• Iingxaki ezinxulumene nomxholo
Flight Simulator X Service Pack 2 (Cofa ukuze ulande) Uphucula le misebenzi ilandelayo:
• Multiplayer ehambelanayo
Kufuneka uzifake kwiNkonzo Pack 1 (SP1), phambi kokuba lowo wesibini.
njani ukuba loluphi uguqulelo FSX ifakiwe computer yam? FSX-SP1, SP2 okanye lonikezelo? Ukukwazi ukuba yiyiphi i-FSX efakwe kwikhompyutheni yakho, kulula: Qala i-FSX, kwaye uqale inqwelo apho uya khona ...
Indlela kukhupha ngokupheleleyo Rikoooo add-on? Zonke ii-add-ons ezivela kwi-Rikoooo zinokukhishwa ngendlela efanayo: Oku kusebenza kwi-Windows Vista, i-7, i-8 kunye ne-10.
Zonke add-Izongezelelo ukusuka Rikoooo singamiswa RPM ngendlela enye:
Kwi desktop, nqakraza kwi « Menu Qala », Ngoko« zonke iinkqubo »Kwaye uye« Rikoooo Izongezelelo »
eneenkcukacha. Xa unqakraza kuyo, uza kufumana uluhlu Izongezelelo oye ezifakwe kwi computer yakho. Ngoku, nje
kufuneka ukhethe lowo ufuna kukhupha.
Enye indlela, ukusuka Iphaneli yokulawula of Windows ukhetha Iinkqubo Iimpawu ngoku ubona uluhlu zonke iinkqubo zakho efakiweyo, khetha leyo ufuna kukhupha.
Baphi iimanyuwali, ReadMe.txt, Copyright etc? Ukusuka kwi-auto-installers version 10 okanye + zonke iincwadi zifumaneka kwifolda yam Amadokhumenti okanye amaxwebhu asekelwe kwiWindows yakho ...
Andikwazi ukufumana «Imboniso DirectX 10» ibhokisi ngokwezicwangciso FSX. Ndingenza ntoni ? Okokuqala, khangela ukuba une-FSX-SP2 efakwe kwikhompyuter yakho. Ewe, i-«Preview DirectX 10» ibonakala kuphela ukuba ...
Ezinye izxhobo zokulinganisa ezisisiseko okanye iziphumo zilahlekile. Ndingenza ntoni ? Xa kuninzi ukuguqulwa kwenziwe kwifolda ye "Gauge", ngokuqhelekileyo ukuba inxalenye ...
Prepar3D v2 and v3: Amanzi avela sceneries kunye namanxweme kumnyama kakhulu, andiyiboni yikristale amanzi ecacileyo Le ngxaki ibangelwa ukusetyenziswa komsebenzi we-Hardware Tessellation kwindlela yokucwangcisa imifanekiso ye-Prepar3D v2 okanye ...
Le ngxaki ibangwa ipoti ye komsebenzi hardware IiTessellation kuqwalaselo graphic of Prepar3D v2 okanye v3.
Nantsi uthelekiso kunye ezintle Seychelles Photo Scenery Real Pack avalaible apha :
Kunye Hardware IiTessellation yenziwe
Ngaphandle Hardware IiTessellation yenziwe
Njengoko kubonisiwe kuthelekiswa ngasentla, ingasebenzi umsebenzi hardware IiTessellation ingxaki ingalungiseka.
Emva ulwenziwo kufuneka iqale Prepar3D ukuze sisombululo ukuthatha isiphumo.
NgoLwesihlanu kuNovemba 20 by rikoooo
Imibukiso ayinakwenziwa ngokuzenzekelayo nge-Prepar3D v4. Ndifumana umyalezo wephutha xa uvula i-P3D Abasebenzisi be-Prepar3D v4: Ukulandela utshintsho lwe-charset kwi-Scenery.cfg ku-UTF-16LE abafaki-zixhobo abanako ukukwazi ukunceda ...
Abasebenzisi beV3 entsha Prepar4D: Ukulandela utshintsho lwe-charset kwi-Scenery.cfg ku-UTF-16LE abafaki-zixhobo abanakho ukukwazi ukuvumela indawo yakho ngokuzenzekelayo.
Isisombululo sethutyana: Vula ifolda C: \_ ProgramData \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D v4 uze uvule ifayile Scenery.cfg nge Notepad uze uklifaze Ifayile - Gcina njenge ... Kwifestile evulayo khetha UTF-8 kwinsimu yokucoca (khangela umfanekiso ngezantsi) kwaye nqakraza Gcina.
Phinda uphinde ufake indawo kunye ne-voila.
Olu lungiso luya kuphinda lufakwe kwi-installation nganye yeendawo ezibonakalayo kuba iP3D iphinda igcine ifayile ye-Scenery.cfg kwi-UTF-16LE emva kokuvula nganye.
Imibukiso yongezwa emva kukaSeptemba 6, i-2017 ayichaphazelekayo ngolu hlobo.
Sihlaziya i-installer yokuzenzekelayo yendawo nganye, ingxaki iya kulungiswa kungekudala, kodwa ithatha ixesha elithile.
NgoLwesine uSeptemba 07 by rikoooo
Xa ndicofa kwiqhosha lokukhuphela akukho nto eyenzekayo, yintoni oyenzayo? Ulinde kodwa akukho nto iyenzekayo, akukho fayile ikhutshwe, mhlawumbi emva kwemizuzu embalwa elinde ufumana impazamo ...
Indlela ukuze ungene kwi-akhawunti yam? Kubalulekile ukuba ungene ngemvume kwi-akhawunti yakho ukuze ujabulele zonke iinkonzo zethu. Ukuze wenze ...
Kubalulekile ukuba ungene ngemvume kwi-akhawunti yakho ukuze ujabulele zonke iinkonzo zethu. Ukuze wenze oku, uzakufumana imodyuli phezulu kwesikrini sakho phantsi kwemenyu ephezulu kuyo yonke iphepha lewebhu. Unokungena ngemvume ngeendaba zakho ezithandayo zentlalo ezifana ne-Facebook
Emva kokungena ngemvume ngempumelelo
Indlela ukutshintsha igama lam? Into yokuqala yokuyenza kukuba ungene kwi-akhawunti yakho usebenzisa i modyuli yokuxhuma ukuya phezulu. Cofa ...
Into yokuqala omawuyenze ukuba ungene kwi-akhawunti yakho usebenzisa lomnqongo ngokunxulumeme ukuya phezulu. Nqakraza kwi «Hlela i-akhawunti yam».
Ngoku, kufuneka ukuba ufake igama lakho lemfiho elitsha kabini, kwimihlaba eboniswe ngezantsi. Ngoko, nqakraza «Ngenisa» ukugcina iinguqulelo.
Ndiyilibele password wam kunye / okanye lomsebenzisi wam. Ndingenza ntoni ? Ukuba ukhohliwe iphasiwedi kunye / okanye igama lakho lomsebenzisi, kukho izixhobo ongazisebenzisa ukufumana ezi nkcukacha: Ndilibalekile ...
Ukuba ngaba ulibele ukuba igama kunye / okanye lomsebenzisi wakho, kukho izixhobo ungasebenzisa ukufumana ezi nkcukacha:
Ndiye ndilibele igama lam
Ndiye ndilibele lomsebenzisi yam
Ukuba nangoku ungakwazi ukungena kwiakhawunti yakho, qhagamshelana nathi ukuze sikwazi ukwenza iinguqulelo eziyimfuneko: Qhagamshelana nathi.
umrhumo wam egumbo luyasebenza, kodwa isantya yam Ukukhuphela nangoku umda - Okokuqala, qwasela ukuba umgaqo othi "Jumbo OK" usekwe kwicala eliphezulu lewebhu ...